Ahoana no fomba hamoronana backlink amin'ny aterineto?
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ny fampiroboroboana ara-barotra amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny fanentanana fananganana rohy tsara. Ny fanatsarana ny fikarohana ny tranonkalan'ny fikarohana dia manampy anao hahita ny fikarohana an-tserasera ary hampiakatra ny fahafahanao hanatsara ny fahatsapana sy ny fahefana amin'ny marika ary koa ny hisintonana mpanjifa maro hafa.
Inona no azon'ireo artista atao mba hitondra fitohanana mora kokoa amin'ny pejy Internet? Iray amin'ireo mpamily lehibe amin'ny fifamoivoizana organika ny fikarohana. Izany no mahatonga ny rohy amin'ny tranonkalanao miseho ao anaty fikarohana an-tserasera dia afaka manome ny ezaka SEO anao. Ny teknikam-pikarohana fitrandrahana maoderina dia ahitana ny teny fikarohana sy ny fampiharana azy marina. Ankoatr'izay, mba hahazoana fitomboana hita maso, tokony hanavao tsy tapaka ny votoatinao ianao ary manoratra amin'ny tena mahaliana ho an'ny lohahevitra mety ho an'ny mpanjifa. Na dia izany aza, ny iray amin'ireo fomba mora indrindra hanatsarana ny tranokala momba ny zavakanto SEO dia amin'ny fahazoana backlinks. Mila mahazo antoka ianao fa izy ireo dia kalitao sy manan-danja. Raha tsy izany dia mety ho very ny toeran'ny SERP. Ny laharana ambony kokoa ny tranokala hafa, ny salan'isa bebe kokoa manome azy. Google, sy milina fikarohana hafa manan-danja hafa, dia manombana loharanom-baovao amin'ny alàlan'ny rohy ekena ivelany izay manondro azy io. Manampy azy ireo ny hanavaka ny mombamomba ny besinimaro mendrika avy amin'ny hafa.
Ny fanoratana avy amin'ny blaogy sy ny sehatra media dia fahafahana tonga lafatra hananganana profil-rohy matanjaka. Ny lahatsoratra fanoratana vahiny momba ny mombamomba ny blaoginao sy ny tranonkala dia afaka manampy be dia be koa. Na izany aza, misy ny webmasters sasany izay tsy manam-potoana ary maniry ny hampiasa vola amin'ireto teknolojia fanorenana manaraka ireto. Na izany aza dia misy ny lalana tsara. Afaka mamorona rakitra an-tserasera izy ireo amin'ny fanomezana anjara amin'ny loharanom-baovao izay manana mpanaraka marobe ary mamela ny bokim-bokin'ny gny tranonkala.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny antsipirian'ny loharanom-baovao izay ahafahanao manangana ny tranonkalan'ny aterineto amin'ny alàlan'ny fametrahana references eo amin'ny pejy.
Loharanon-tranonkala manampy amin'ny famerenana backlinks amin'ny aterineto
Nanapa-kevitra ny hanome soso-kevitra momba ny tranonkala sarobidy izay afaka manome kalitao an-tserasera an-tserasera ianao ary mampitombo ny lazanao.
Medium dia tranonkala fanta-daza iray izay manavao hatrany ny votoaty ary mamporisika ireo mpitoraka blaogy sy tompona fandraharahana mba hamoaka lahatsoratra avo momba azy pejy. Ny lahatsoratrareo dia mety ho lohahevitra rehetra ary mety ahitana sary tahaka ny horonan-tsary, sary, infografika, sy ny sisa. Fotoana tena tsara ho an'ny mpanakanto sady mpanao sary ny fampitana azy ireo amin'ny fampitana fampahalalana manan-danja momba ny marika, tsy amin'ny alalan'ireo teny ihany. Ireo lahatsoratra izay mahazo ny tiana sy ny tati-maro dia lasa TOP ary mijanona ho an'ny mpitsidika rehetra mandritra ny fotoana lava.
Quora dia fanontaniana sy valiny hita ao amin'ny loharanon-kevitra ireo fanontaniana izay heveriny fa matihanina. Ity sehatra ity dia manome fahafahana ho an'ireo mpivarotra sy mpitoraka bilaogy an-tserasera mba hamorona ny mombamomba azy manokana ary hanoratra lahatsoratra bilaogy amin'ny lohahevitra tiany. Na izany aza, tsy ny lahatsoratra rehetra dia tokony havoaka amin'ny pejy Quora. Izany no mahatonga anao ho azo antoka fa ny valiny dia fikarohana mifototra sy mahaliana Source .